Tool dia mampiseho ny hoavin'ny hoavy sy ny fanamafisana | | Reef Resilience
Ny fitaovana dia mampiseho ny hoavin'ny hoavy sy ny fanamafisana
vaovao Fitaovana Google Earth dia ahitana ny fiheverana farany momba ny fivalanana sy ny fanamafisana ny ranomasina ho an'ny faritra rehetra eny amin'ny vatohara. Ny toetr'andro dia mifototra amin'ny modelim-pahaizana momba ny toetr'andro avy amin'ny tatitra fanamarinana fahadimy faha-IPCC. Amin'ny fampiasana ity fitaovana ity, ny mpitantana dia afaka mankany amin'ny toerana mahaliana sy mijery:
Ny taonan'ny famokarana ambaratongam-pandrefesana roa izay fantatra fa miteraka fanesorana dia dingana roa isaky ny folo taona sy isan-taona;
Nolavina ny toetr'andro tao amin'ny fanjakan'ny satroboninahitra aragonite ary koa ny fihenan-kery mifanaraka amin'izany.
Ny fampiasana ny fitaovana sy ny sary azony avy amin'izany dia hanampy ireo mpitaingin-tseraseran'ny haran-dranomasina mba hampitana ny loza ateraky ny fiovan'ny toetrandro amin'ny fiovan'ny toetr'andro miaraka amin'ny mpiara-miasa, ny mpandray anjara ary ny mpanao politika.
The taratasy mifandraika amin'izany dia mamintina ny valin'ny fanjonoana ary manasongadina fa eo ambanin'ny sehatra fanodikodinam-bolan'ny fosilin'ny solika, dia tsy misy refugia hatramin'ny fanombohan'ny fanafana mafy orinasa isan-taona na ny fiantraikan'ny ranomafana ny ranomasina. Anatin'ity toe-javatra ity, avy amin'ny 2053, 90% amin'ny faritra rehetra eny amin'ny vatohara dia hihaona marefo isan-taona. Misy mifanohitra amin'ny elanelam-potoana any amin'ireo horohoron-tany ireo, izay midika fa ireo faritra voavolavolan'ny fananganana fitrandrahana taty aoriana dia miharihary amin'ny vokatry ny fananganana mandritra ny fotoana lava.
Ny Programan'ny Reef Resilience dia niresaka tamin'ny iray amin'ireo mpanoratra ny tatitra, Dr. Ruben van Hooidonk, mikasika ny maha-zava-dehibe an'ity fitaovana ity ho an'ireo mpitantana haran-dranomasina.
Misy vaovao tsara ve avy amin'ny zavatra hitanao?
Amin'ny ankapobeny, ny vaovao dia somary pessimistika, saingy ny tetikasa dia mampiseho fa ny vatohara sasany dia hahatsapa ny fahasimban'ny rivotra isan-taona 20 taona na mihoatra kokoa noho ny hafa. Maro amin'ireo toerana ireo no misy dikany eo an-toerana sy iraisam-pirenena, toy ny faritra atsimon'ny Harambato Barry Great.
Ahoana no ahitanao mpitantana vatohara ho an'ny vatohara mampiasa an'io fitaovana io?
Ny fitaovana namboarinay dia mamela ny fidirana amin'ireo vinavina izay manana famahana henjana (1 degre amin'ny 1 degre) ary mandritra ny fotoana maharitra (am-polony taona maro). Noho izany, ny valiny dia tsy mampahafantatra ny kendrena amin'ny fidirana an-tsehatry ny fitantanana toy ny fampihenana ny tsindry avy amin'ny jono sy ny scuba, na dia mampitombo ny tosika amin'izany fihetsika izany aza izy ireo. Ny tanjona voalohany nananganana sy nametrahana ireo vinavina dia ny drafitra maharitra sy ny fanentanana / ny fanentanana.
Inona ireo dingana manaraka eritreretinao fa tokony haka an-keriny ny mpitaingina vatohara rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity mba hiatrehana ny fiantraikan'ny ranonorana sy ny haran-dranomasina ao amin'ny tranokalany?
Ny lahatsoratra sy ny fitaovana napetrakay dia manasongadina ny haratsin'ny vatohara. Na dia tsy afaka mamaha ny olana ara-tontolo iainana manerantany aza ny mpitantana haran-dranomasina dia mety hampihena ny tsindry ao an-toerana izay mampifangaro ireo mifandray amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fanamafisana. Angamba mihoatra noho ny lahatsoratra rehetra talohan'izay, ny asantsika dia mampiseho ny filaminana sy ny filàn'ny hetsika eo an-toerana izay manohana ny faharetan'ny rafi-pitaterana an-dranomasina.